Yohane 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 11:1-57
Lasaro wui (1-16)
Yesu kyekyee Marta ne Maria werɛ (17-37)
Yesu nyan Lasaro (38-44)
Wɔbɔɔ pɔw sɛ wobekum Yesu (45-57)
11 Ná ɔbarima bi a wɔfrɛ no Lasaro yare. Ná ofi Betania, akuraa a Maria ne ne nuabea Marta+ fi mu no. 2 Maria yi, ɔno na ohwiee ngo huamhuam guu Awurade ho, na ɔde ne ti nwi popaa ne nan ase+ no. Ne nuabarima ne Lasaro a na ɔyare no. 3 Enti ne nua mmea no de nkra kɔmaa Yesu sɛ: “Awurade, hwɛ! nea wopɛ n’asɛm no yare.” 4 Na bere a Yesu tee no, ɔkae sɛ: “Saa ɔyare yi nyɛ yare a ɛde no bɛkɔ owu mu, na mmom Onyankopɔn anuonyam ntia,+ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛfa so ahyɛ Onyankopɔn Ba no anuonyam.” 5 Ná Yesu dɔ Marta ne ne nuabea ne Lasaro. 6 Nanso bere a ɔtee sɛ Lasaro yare no, ɔtenaa baabi a na ɔwɔ no nnanu kaa ho. 7 Na ɛno akyi no, ɔka kyerɛɛ asuafo no sɛ: “Momma yɛnkɔ Yudea bio.” 8 Asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Rabi,+ nnaano yi ara na anka Yudafo no resiw wo abo,+ ɛnna woresan akɔ hɔ bio yi?” 9 Yesu buae sɛ: “Ɛnyɛ nnɔnhwerew 12 na ɛwɔ adekyee mu?+ Sɛ obi nantew awia a, ne nan mpem hwee,* efisɛ ohu wiase hann. 10 Na sɛ obi nantew anadwo a, ne nan pem ade,* efisɛ onni hann mu.”* 11 Bere a ɔkaa eyinom no, ɔka kaa ho sɛ: “Yɛn adamfo Lasaro ada,+ na merekɔ hɔ akonyan no.” 12 Ɛnna asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, sɛ wada a, ɛnde ne ho bɛtɔ no.” 13 Yesu de, ne wu ho asɛm na na ɔreka. Nanso na wɔn adwene yɛ wɔn sɛ nna ankasa ho asɛm na ɔreka. 14 Enti afei de, Yesu ka kyerɛɛ wɔn pen sɛ: “Lasaro awu,+ 15 na mo nti, ɛyɛ me dɛ sɛ na minni hɔ, na ama moagye adi. Momma yɛnkɔ ne nkyɛn.” 16 Enti Toma a na wɔfrɛ no Ata no ka kyerɛɛ ne mfɛfo asuafo no sɛ: “Momma yɛn nso yɛnkɔ na yɛne no nkowu.”+ 17 Bere a Yesu duu hɔ no, ohui sɛ na Lasaro adi nnanan dedaw wɔ ɔda no mu. 18 Ná Betania bɛn Yerusalem. Efi Yerusalem rekɔ hɔ bɛyɛ akwansin* abien. 19 Ɛno nti, na Yudafo bebree aba Marta ne Maria nkyɛn rebɛkyekye wɔn werɛ, wɔn nua no nti. 20 Bere a Marta tee sɛ Yesu reba no, okohyiaa no; na Maria+ de, ɔtenaa fie. 21 Ɛnna Marta ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Awurade, sɛ wowɔ ha a, anka me nua no anwu. 22 Na seesei mpo, minim sɛ ade biara a wubebisa Onyankopɔn no, Onyankopɔn de bɛma wo.” 23 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nua no bɛsɔre.” 24 Marta ka kyerɛɛ no sɛ: “Minim sɛ da a etwa to no, ɔbɛsɔre wɔ owusɔre no mu.”+ 25 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Mene owusɔre ne nkwa.+ Nea ogye me di no, sɛ owu mpo a, ɔbɛba nkwa mu; 26 na obiara a ɔte ase a ogye me di no, ɔrenwu da.+ Wugye eyi di anaa?” 27 Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yiw, Awurade, migye di sɛ wone Kristo no, Onyankopɔn Ba no, nea ɔreba wiase no.” 28 Bere a ɔkaa eyi wiei no, ofii hɔ kɔe, na ɔkɔfrɛɛ ne nua Maria. Ɔka guu n’asom sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo+ no aba, na ɔrefrɛ wo.” 29 Bere a Maria tee saa no, ɛhɔ ara na ɔsɔree, na ɔkɔɔ ne nkyɛn. 30 Saa bere no, na Yesu nnya nkɔɔ akuraa no ase, na mmom na ɔda so wɔ baabi a Marta behyiaa no no. 31 Bere a Yudafo a na wɔne Maria wɔ ofie hɔ rekyekye ne werɛ no hui sɛ wasɔre prɛko pɛ apue no, wodii n’akyi. Ná wɔn adwene yɛ wɔn sɛ ɔrekɔ ɔda+ no so akosu wɔ hɔ. 32 Bere a Maria duu baabi a Yesu wɔ a n’ani bɔɔ no so no, ɔhwee ne nan ase, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, sɛ wowɔ ha a, anka me nua no anwu.” 33 Bere a Yesu hui sɛ Maria resu, a Yudafo a wɔkaa ne ho bae no nso resu no, oguu ahome kɛse,* na ne ho yeraw no. 34 Na obisaa wɔn sɛ: “Ɛhe na mode no toe?” Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, bra bɛhwɛ.” 35 Yesu sui.+ 36 Ɛnna Yudafo no fii ase kae sɛ: “Monhwɛ sɛnea na ɔpɛ n’asɛm!” 37 Nanso wɔn mu bi kae sɛ: “Ɔbarima yi a obuee onifuraefo no ani+ no, enti wantumi anhwɛ ama oyi awu?” 38 Afei bere a Yesu guu ahome bio no, ɔbaa ɔda no so. Ná ɛyɛ ɔbodan, na na ɔbo tweri ano. 39 Yesu kae sɛ: “Munyi ɔbo no.” Ɛnna Marta a ne nua awu no ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, sesɛɛ de, wabɔn, efisɛ wadi nnanan.” 40 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Manka ankyerɛ wo sɛ wugye di a, wubehu Onyankopɔn anuonyam?”+ 41 Enti woyii ɔbo no fii hɔ. Afei Yesu maa n’ani so hwɛɛ soro,+ na ɔkae sɛ: “Agya, meda wo ase sɛ woatie me. 42 Minim paa sɛ wutie me daa; nanso nnipadɔm a wogyinagyina ha no nti na mereka eyi, sɛnea ɛbɛyɛ a wobegye adi sɛ wo na wosomaa me.”+ 43 Bere a ɔkaa saa no, ɔde nne kɛse teɛɛm sɛ: “Lasaro, pue bra!”+ 44 Ɛnna ɔbarima a wawu no pue bae. Ná wɔde ntama akyekyere ne nan ne ne nsa, na na wɔde ntama bi akyekyere n’anim. Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsan no, na momma ɔnkɔ.” 45 Enti Yudafo a na wɔaba Maria nkyɛn a wohuu nea Yesu yɛe no bebree gyee Yesu dii.+ 46 Nanso wɔn mu bi kɔɔ Farisifo no hɔ, na wɔkɔkaa nea Yesu ayɛ no kyerɛɛ wɔn. 47 Ɛno nti, asɔfo mpanyin ne Farisifo no frɛɛ Sanhedrin no behyiae, na wɔkae sɛ: “Dɛn koraa na yɛnyɛ, efisɛ ɔbarima yi yɛ nsɛnkyerɛnne+ bebree? 48 Sɛ yegyaa no saa a, wɔn nyinaa begye no adi, na Romafo no bɛba abɛfa yɛn ha yi* ne yɛn man no nyinaa.” 49 Nanso wɔn mu baako, Kaiafa,+ a na ɔyɛ ɔsɔfo panyin saa afe no, ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnim hwee koraa. 50 Enti munnim sɛ eye ma mo sɛ onipa baako bewu ama ɔmanfo no, sen sɛ ɔman mu no nyinaa bɛsɛe?” 51 Nanso ɛnyɛ ɔno ara na ɔde n’adwene kaa eyi. Mmom, na ɔyɛ ɔsɔfo panyin saa afe no. Ɛno nti na ɔhyɛɛ nkɔm sɛ, ɛsɛ sɛ Yesu wu ma ɔman no. 52 Ɛnyɛ ɔman no nko ara, na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛboaboa Onyankopɔn mma a wɔabɔ wɔn ahwete no ano ayɛ wɔn baako. 53 Enti efi saa da no ara wɔbɔɔ pɔw sɛ wobekum no. 54 Ɛno nti, Yesu annantew baguam bio wɔ Yudafo no mu, mmom ofii hɔ kɔɔ baabi a ɛbɛn sare so, kurow bi a wɔfrɛ no Efraim+ mu, na ɔne n’asuafo no tenaa hɔ. 55 Saa bere no, na Yudafo Twam+ Afahyɛ no abɛn. Na nnipa bebree fi nkuraase foro kɔɔ Yerusalem ansa na Twam Afahyɛ no redu so, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛkɔ akodwira wɔn ho. 56 Ná wɔrehwehwɛ Yesu, na bere a wogyinagyina asɔrefi hɔ no, wobisabisaa wɔn ho sɛ: “Mudwen ho dɛn? Ɔremma afahyɛ no ase koraa anaa?” 57 Ná asɔfo mpanyin ne Farisifo no ahyɛ mmara sɛ, sɛ obi hu baabi a Yesu wɔ a, ɔmmɛbɔ wɔn amanneɛ na wɔnkɔkyere no.
^ Anaa “onhintiw.”
^ Anaa “ohintiw.”
^ Anaa “efisɛ hann nni ne mu.”
^ Bɛyɛ km. abiɛsa. Nt., “bɛyɛ agoprama 15.” Hwɛ Nkh. B14.
^ Nt., “oguu ahome kɛse wɔ honhom mu.”
^ Kyerɛ sɛ, asɔrefi no.